कस्तो प्रवितीका हुन्छन् मेष राशिका मानिसहरु ? – Suchana Hub
कस्तो प्रवितीका हुन्छन् मेष राशिका मानिसहरु ?
काठमाण्डौ । मेष राशि हुने व्यक्तिहरु निकै क्रोधी र महत्वाकांक्षी हुने गर्दछन । मेष राशिलाई मङ्ल को बिशेष प्रभाव परेको हुन्छ, उनिहरु निकै र छिट्टै रिसाउनी खालका हुन्छन भने एकोहोरो पनि हुन्छन । उनिहरु जती रिसाहा र काठोर हुन्छन तेत्तिनै छिटो शान्त हुने र कोमलो मन भएका पनि हुन्छन । क्रोधित भएको समयमा मेष राशिहरुलाई नियन्त्रणमा राख्न धेरैनै गार्हो हुने गर्छ। आफ्नो अपमान भएको अवस्थामा मेष राशि भएका व्यक्तिहरु हिंसक पनि हुने गर्छन्। उनिहरु अनुशासनमा निकै ध्यान दिन्छन र सबैलाई आफ्नो तल राखेर काम गर्न मन पराउँछन् । भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । subscribe मा क्लिक गरेपछि सँधै भिडियो हेर्न पाईनेछ ।
उनिहरु निकै हत्तार गर्ने प्रबित्तिका हुन्छन, कुनि पनि कार्य हतार मै गर्छन । आफ्ना नातागोतामा सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्न यस्ता मानिसले आफ्नो वाणी र व्यवहारमा विनम्रता ल्याउनु पर्छ भने उनीहरुलाई नयाँ योजना बनाउन मन पर्छ । नेतृत्व गर्न चासो राख्ने यी व्यक्तिहरु कसैको निर्देशनमा काम गर्न मन पराउँदैनन्। मेष लग्नका जातक सफा मन भएका हुने गर्दछन् र जस्तै भए पनि भन्नु पर्ने कुरो अगाडि नै भन्ने उनीहरुको बानी हुन्छ । उनीहरु कहिल्यै पछाडी कुरा गर्दैनन् ।
Tags: #ताजा समाचार, राशि
Previous दालचिनीको प्रयोगले यसरी घटाउनुहोस ज्यान :
Next घरमा माउसुली देख्नुभयो ? यस्तो हुनसक्छ संकेत..